Waxaa jiri kara dhacdo Apple ah bisha Maarso laakiin maahan 16 | Waxaan ka socdaa mac
Xanta ay bilaabeen maalinlaha reer Taiwan ee maalinlaha ah ee maalinlaha dhaqaalaha ee ku saabsan suurtagalnimada Dhacdada Apple bishii Maarso 16, waxaa si dhakhso leh u lumiyay falanqeeyayaasha kale ee caadiga ah ee Apple. Waa inaan rumeynaa tan dambe sababtoo ah Taiwan waxay ku leeyihiin xisaabaadyo falanqeeyeyaal ah oo ku saabsan Twitter-ka oo aan si sax ah loogu kalsoonaan karin. Waqtigan xaadirka ah wax guul ah kama gaarin saadaasha Apple
Marka reer Taiwan macnaheedu yahay Maaliyadda Maaliyadda ayaa sii daayay wararka ku saabsan dhacdada khadka tooska ah ee Apple ee khadka tooska ah bishii Maarso 16 ee sanadkan, inbadan waxay bilaabeen inay sameeyaan xisaabinta aaladaha Apple soo bandhigi karto. Waa inaan maskaxda ku haynaa inaan u maqnayn a 16 ″ MacBook Pro oo leh M1 iyo qaar ka mid ah AirTags iyo waxyaabo kale. Si kastaba ha noqotee waa inaanan heesin guul maxaa yeelay waxaad moodaa in warkani asal badan lahayn.
Xusuus-qorkan waxaa lagu saleeyay macluumaadka ay bixiyeen akoonnada Twitter ee LeaksApplePro iyo FrontTro. Kuwaas oo leh heerar hooseeya. Sidoo kale kuma tiirsanaan karno fikradda ah in Apple had iyo jeer soo bandhigto qalab cusub bisha Maarso. Xusuusnow dhacdooyinkii guga ee la soo dhaafay waxaa la qabtay Maarso 9 (2015), Maarso 21 (2016), Maarso 27 (2018) iyo Maarso 25, 2019, iyada oo aan midna jirin wax dhacdooyin ah Maarso 2017 ama Maarso 2020.
Sidoo kale Bloomerg, falanqeeyahiisa Mark Gurman ayaa si sax ah u sheegay ma jiri doonto dhacdo maalinta xigta 16. In kasta oo uu albaabka u furay si aan u aragno mid ka mid ah bisha Maarso. Tani waa sida uu ugu muujiyey farriimaha farriintiisa Twitter:
Sheekeeye: Midkoodna ma dhammaan doono https://t.co/SVAdtzfjqz
- Mark Gurman (@markgurman) February 20, 2021
Farriintan ayuu Mark Gurman ugu jawaabayaa Joe Rossignol, tifaftiraha MacRumors oo ku celceliya wararka xanta ah ee ka imanaya Taiwan. Si kastaba ha noqotee, wuxuu gadaal ka sheegayaa laba jeer, taas dhacdadu waxay dhici kartaa bisha Maarso laakiin maahan 16-ka.
Daahfurka maahan 16-ka
Waxaan ula jeeday dhacdo aan dhicin 16-kii Maarso
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Waxaa jiri kara dhacdo Apple ah bisha Maarso laakiin maahan 16-keeda
Tim Cook wuxuu leeyahay 2020 wuxuu ahaa sanadkii ugu wanaagsanaa ee hal-abuurnimada taariikhda Apple